Iziphi izitifiketi ezitholwe yinkampani yakho?
U-Uniwell uthole i-SC, Ksoher, Halal, Non-GMO, Import and Export Qualification, Commodity Inspection Qualification, Cargo Transportation Qualification, njll.
Njengamanje uhlela ukuthola: ISO9001, HACCP, FSSC22000
Imiphi imikhiqizo onayo?
I-Uniwell Bio ithatha ukukhishwa kwesoya nobhontshisi we-polygonum cuspidatum njengemikhiqizo ehamba phambili, i-andrographis extract, i-phellodendron extract, i-epimedium extract, i-olive extract kanye neminye imikhiqizo enezinzuzo zokukhiqiza eSichuan njenge-supplement, ndawonye ukwakha isakhiwo somkhiqizo wemodeli yempi.
Ukukhiqizwa kwethu kokukhishwa kwesoya kukhulisa nenqubekela phambili yesipiliyoni sangempela, futhi futhi singamabhizinisi amakhulu kakhulu wokukhiqiza i-soya eChina. Ithimba labaphathi lineminyaka engaphezu kwengu-20 lokukhiqiza nelokuthengisa kulo mkhiqizo.
Imigomo Nemininingwane Yokubambisana
Imigomo ye-1.Payment, ukwehla kwamanani entengo
Yimiphi imigomo nezindlela zokukhokha ozisekelayo nokuthi kungani intengo yomkhiqizo iguquka?
Amasampula nama-oda wesampula: Sinikeza amasampula wokuhlola nokushaja amasampuli ngokweqile kobuningi. Amasampula amashajiwe kanye nama-oda esampula adingeka ukulethwa ngemuva kokukhokha.
Ukubambisana Okokuqala: Sidinga ukukhokhelwa kusengaphambili ngokubambisana kokuqala kwamakhasimende.
Amakhasimende Esikhathi Eside: Kuma-oda amancane angaphansi kuka-1000 yuan, ukulethwa kuzokwenziwa lapho sekutholwe inkokhelo. Kumakhasimende esikhathi eside, umnyango wethu wezezimali unesikhathi se-akhawunti esilandelanayo, omude kunabo bonke awudluli izinsuku ezingama-90.
Imigomo Yokukhokha: Kunemigqa ehlukile yesikweletu yamakhasimende ahlukile, ngokuvamile isikhathi sezinsuku ezingama-30-90 se-akhawunti.
Ukupakisha, ukuthunyelwa kwembobo, Umjikelezo Wezokuthutha, Ukulayisha
Ukugwema kanjani ukulinyazwa kwemikhiqizo yakho?
Ukupakisha Okujwayelekile: Izigubhu zekhadibhodi noma ukupakisha kwemigqomo yamaphepha wonke, usayizi wesigubhu ngu-80380mm * H540mm. Ukupakisha kwangaphakathi yisikhwama sepulasitiki esiphindwe kabili esinezintambo zepulasitiki ezimhlophe. Uphawu lokupakisha lwangaphandle uphawu lokuhola noma uphawu olumhlophe olusobala. Iphakethe lisetshenziselwa ukubamba ama-25KG.
Iphakheji Usayizi: Lonke iphepha isigubhu (Ø290mm * H330mm, kuze 5kg)
(Ø380mm * H540mm, kuze kufike ku-25kg)
Iron iringi isigubhu (Ø380mm * H550mm, kuze kube 25kg)
(Ø450mm * H650mm, kuze kufike ku-30kg noma imikhiqizo ephansi yobuningi 25kg)
Ibhokisi (L370mm * W370mm * H450mm, kuze kufike ku-25kg)
I-Kraft iphepha (kufika ku-20kg)
Izindlela zokuhamba: izindlela ezi-3 zokuhamba kwasekhaya okungukuhleleka kwezinto, ukuthuthwa okuvezwa nomoya. Izindlela zokuhamba zomhlaba wonke zihamba emoyeni nasolwandle, ikakhulukazi kusuka emachwebeni aseNingbo, Tianjin, Beijing naseShanghai.
Isimo sesitoreji: Gcina uvaliwe ekamelweni lokushisa kude nokukhanya, kusebenza izinyanga ezingama-24.
Izindlela zokuvikela: Kusetshenziswa izikhwama ezilukiwe ngaphandle kwemigqomo ekuthuthweni kwasekhaya; Ukuthuthwa kwamazwe omhlaba kusetshenziswa ama-pallet nefilimu elula.
Umjikelezo Wezokuhamba: NguLwandle- Imikhiqizo izofakwa endlini yokugcina impahla kungakapheli isonto uma kukhona isitoko, umjikelezo wokuthumela uzoba cishe amasonto ama-3; Ngomoya - Ngokujwayelekile indiza izohlelwa kungakapheli isonto ngemuva kokufakwa kwe-oda.
Ingabe uyawasekela ama-oda e-OEM futhi isikhathi esingakanani isikhathi sokulethwa?
Ukulethwa okuyisampula: Amasampula ajwayelekile ngaphambi kuka-3: 00 ntambama phakathi nezinsuku angalethwa ngosuku olufanayo kungenjalo azolethwa ngosuku olulandelayo.
Inani Lesampula: 20 g / isikhwama mahhala.
Ukucubungula kwe-OEM: Samukela ama-oda emikhiqizo ekhethekile yokucaciswa efana ne-plasticizer ephansi, okusalayo kwe-solvent okuphansi, i-PAH4 ephansi, i-isoflavones ephansi ye-benzoic acid soy. Ubuncane be-oda lobuningi be-benzoic acid soybean isoflavones yi-10KG njengamanje kanti isikhathi sokulethwa yizinsuku eziyi-10. Eminye imikhiqizo ye-OEM idinga ukuhlukanisa umjikelezo wokucubungula ngokusho kwemikhiqizo.
Inventory: Ama-isoflavones weSoya, ukuhlolwa kwe-5% - 90% konke kusesitokisini. Isitoko esimi sithi: 5% 2MT, 40% 2MT, 40% plasticizer low 500KG, 40% low residual 500KG, 40% PAH4 500KG low, 80% 200KG, 90% 100KG.
Isikhathi sokuthumela: Kumikhiqizo enezitoko ezijwayelekile, isikhathi sokulethwa yizinsuku ezi-2. Kulezo zimpahla ezingenazo izitoko kungadinga isikhathi sokuxuba nokuhlola, ikakhulukazi umjikelezo wokuthola amagciwane mude, ngakho-ke isikhathi sokulethwa izinsuku eziyi-7.
4.Izimakethe ezinkulu kanye nezidingo zemakethe ezihlosiwe
HatYiziphi izimakethe eziyinhloko zemikhiqizo yakho? Ngabe angahlangabezana nezidingo zemakethe?
Izimakethe Eziyinhloko: USA, Brazil, Belgium, Italy, Russia, France, South Korea, Vietnam.
Izidingo Zemakethe Yesifunda:
I-USA: I-Non-Irradiated, i-Non-GMO, okusalayo kwe-solvent <5000PPM.
IYurophu: I-Non-Irradiation, i-Non-GMO, i-PAH4 <50PPB, insalela kuphela (i-methanol <10PPM, ayikho i-methyl acetate etholakele, inani eliphelele le-solvent <5000PPM).
IJapan neSouth Korea: I-Non-Irradiation, i-Non-GMO, izinsalela ze-solvent <5000PPM, i-benzoic acid <15PPM.
Ngabe inkampani yakho iyinikeza kanjani insizakalo yokuthengisa ngemuva?
Lapho imboni ithola ukuthi umkhiqizo awufanelekile noma awuphephile, kuzoqalwa Inqubo Yokulawulwa Kokukhumbula Komkhiqizo ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi. Lapho ikhasimende liphikisa ukuphikisana nomkhiqizo, ukuzihlola kwefekthri noma ukuhlolwa kabusha komuntu wesithathu kuzokwenziwa ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo awuphephile noma awuhlangabezani nezimfuneko. Uma umkhiqizo onesici uqinisekisiwe, qala inqubo yokukhumbula njengomkhiqizo ongaphephile. Lapho kungatholakali okungajwayelekile esivivinyweni senkampani yangaphandle, xhumana nekhasimende ukuze lihlanganise indlela yokuhlola futhi lixoxisane ngezinto ezilandelayo.
6.Inventory, Supply Umthamo
Yini iqoqo lakho lomkhiqizo nomthamo wokuphakela?
Umthamo wokusebenza wonyaka we-Uniwell Bio ungamathani ayi-6,000 wezinto zokwelapha ezingavuthiwe, futhi imikhiqizo etholakalayo kanye ne-inventory kuboniswa etafuleni elilandelayo: